တစ်ကျောပိုးအိတ်အဖြစ်နှစ်လအာရှမှတဆင့်ခရီးသွားလာ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ကိုယ့်ရက်အနည်းငယ်အကြာအာရှမှတဆင့်တစ်ဦး 10-သီတင်းပတ်ခရီးမှပြန်လာသောသူကို Assja နှင့်အတူတွေ့ဆုံနေပါတယ်။
နေဆဲ acclimatizing အပေါင်းတို့နှင့်အတူအမှတ်တရများနေဆဲလတ်ဆတ်နေမြဲနေစဉ်သူမ backpacking နှင့်သူမ၏ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းကိုဘာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်သူမ၏ကျောပေါ်ရုံကျောပိုးအိတ်နှင့်အတူအာရှမှတဆင့်တစ်ဦးတည်းခရီးသွားနေစဉ်တွင်, ကိုစုဝေးစေ။
"ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘူလ်ဂေးရီးယား 15 ထားခဲ့တယ်။ ငါက high-ဂုဏ်သတင်းတက္ကသိုလ်အတွက်ရူပဗေဒလေ့လာဖို့ဂျာမဏီသို့သွားကြ၏။ ငါ၏အကျောင်းဆင်းပွဲနောက်မှငါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ရှာတွေ့ဒီမှာနေ၏။ နောက်ဆုံးနှစ်ကငါသိပ္ပံနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာစေ့စပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မခွဲစိတ်စဉ်အတွင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးဖို့ဘယ်လိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း neurosurgeons ထောက်ခံနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြား။ ငါအရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကလူကူညီနေတာပါ, ငါ့အခမဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်မကအခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးကျန်းမာအာဟာရ, ဘာဝနာ, ယောဂသို့မဟုတ်ပဲခရီးသွားလာစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ "
အဘယ်အရာကို backpacking သလဲ?
ကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်လြောကျရှိရာနက်ဖြန်နေ့၌ခေါင်းမှဆုံးဖြတ်ခြင်း, န့်အသတ်အချိန်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကွဲပြားခြားနားသောအရပ်တို့ကိုရန်သင့်နောက်ကျောအပေါ်တဦးတည်းကျောပိုးအိတ် (40 လီတာ 70 မှ) နဲ့အတူခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကကျောပိုးအိတ်အသေးစိတ်အတွက်၎င်းတို့၏ခရီးစီစဉ်တဲ့ပြန်လာနေ့စွဲရှိသည် ဖြစ်. , အခြားသူတွေရုံတလမ်းတည်းဖြင့်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့သာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဦးတည်ရာကိုသိသော, လုံးဝကံကြမ္မာဟာသူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းဆုံးဖြတ်ခွင့်။ အများစုမှာကျောပိုးအိတ်လွယ်ခရီးသည်တစ်ဦးတည်းသွားလာ, အခြားသူများစုံတွဲများသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အုပျစုမြား၌ရှိကြ၏။ သူတို့ကလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထိုကဲ့သို့သောစံများအတွက်တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်မွေးစား, နေထိုင်ရန်အဆောင်များအတွက်ညဖြုန်းနေကြတယ်။
ကျွန်မတိုတောင်းတဲ့အားလပ်ရက်အပေါ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အာရှရှိစဉ်အခါတစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က, ငါသညျဤတိုက်ကြီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းသွားပြီးပိုရှည်ကာလအတွက်ပြန်လာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုငါ့အအလုပ်ကိုပြောင်းပေးဖို့အတှကျအခြိနျအခါ Now ကို, ငါ၏ဤဆန္ဒဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့တစ်ဦးကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်ခရီးစဉ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါပြန်လာလိုသည့်အခါထို့နောက်ငါတစ်ကျောပိုးအိတ်အဖြစ်ပြန်လာကြလိမ့်မည်မသိခဲ့ပါ။ ထိုသည်ဤဘဝမှာအများဆုံးအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံများတဦးဖြစ်ထွက်လှည့်ပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်ဤ2လအတွင်းဘယ်နှစ်ယောက်နိုင်ငံများတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာလဲ
စင်္ကာပူ, ထိုင်း, ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ - ငါ 10 နိုင်ငံများတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့စီမံ4ပတ်ဒီတော့အာရှရှိနိုင်ငံအများစုဟာ, ကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ကနဦးအစီအစဉ်သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်ငါနောက်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်ရွှေ့ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်, အပြင်လာအိုနိုင်ငံလည်းပါဝင်သည်။ အဲဒီအစားကိုယ့်သံဃာတော်များနှင့်သီလရှင်များနှင့်အတူနေထိုင်နေ, ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းများ၌အချိန်ဖြုန်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကျွန်မသွားရောက်ကြည့်ရှုလိုနိုင်ငံတွေဟာကြမ်းတမ်းစိတ်ကူးရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ထိုသို့ပြုမှအမိန့် - တစ်ခါတစ်ရံတွင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတစ်နည်းနည်းရှေ့ဆက်အချိန်, ငွေနှင့်စွမ်းအင်ကယ်တင်တော်မူ၏။ ကျွန်မအနေနဲ့ပွင့်လင်းပြန်လာသည့်ရက်စွဲနှင့်အတူလေယာဉ်ပျံလက်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ငါသည်လမ်းခရီးတလျှောက်တွေ့ဆုံခဲ့ဘယ်သူကိုသည်အခြားခရီးသွားများထံမှအကြံပြုချက်များအဖြစ်ကိုကြားအစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံပြီး, ငါသည်အလြောကျဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တစ်တင်းကျပ်အစီအစဉ်နှင့်အစီအစဉ်ကိုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ တခါတရံကျွန်မရဲ့အတွင်းစိတ်ခံစားချက်အပေါ်မူတည်ပြီး, ကြာကြာနေဖို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်အပြောင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Mid- နှင့်တောင်အမေရိက, ယမ် - နော်ဝေ, ဒိန်းမတ်, ဆွီဒင်, ဥရောပအရာကြွင်းလေ - ဟော်လန်, ဂျာမနီ, မြောက်အမေရိက, ကနေဒါ, အင်္ဂလန်, အိုင်ယာလန်, သြစတြေးလျ - ကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွားလာသူတိုက်ကြီးများ၏အားလုံး (အင်္ဂလိပ်စပီကာကနေကျောပိုးအိတ်; တူရကီ, ရုရှား, အစ္စရေး, အာဖရိက), နှင့်2လမှ2နှစ်ပေါင်းဖို့လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါခေါ်ကျွမ်းကျင်သူများ - ရှည်လျားသောခရီးကိုအပြီးပရဒိသုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအပေါ်အခြေချအများစုမှာအာရှရှိရေတိုသို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ပြီးအလုပ်သူကိုပြန်လည်နေရာချထားရေး, ။ အခြားအာရှနိုင်ငံများထံမှဒေသခံပြည်သူများသို့မဟုတ်ခရီးသွားများအတွက်။ ငါနထေိုငျရာမှာဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဘယ်သူကိုဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့်သီလရှင်။
ငါကအခြားတဲ့ဘူလ်ဂေးရီးယားနှင့်တွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်မဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာငါမဆိုတွေ့ဆုံမည်ခဲ့ပါဘူး။ ငါသည်လမ်းခရီးတလျှောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်လူအပေါင်းတို့ကိုသုံးပါတယ်: "အို, ဘူလ်ဂေးရီးယား - သငျကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပထမဦးဆုံးဘူဂေးရီးယားကျောပိုးအိတ်များမှာ - ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အကြောင်းပိုမိုပြောပြပါ။ "
ကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်ပိုပြီးအားလပ်ချိန်ရှိသည်နှင့်အဘယ်သူသည်ကျောင်းသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီးနောက်ခရီးသွားလာသူကို 20 နှင့် 30 ၏အသက်အရွယ်ကြားရှိလူဦးတို့တွင်ရေပန်းစားသည်။ သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှအသက်အတားအဆီးသည်ရှိ၏, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအသက်အရွယ်မရွေးလူဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ အခွင့်အလမ်း, အချိန်ရှိပြီးအဲဒါကိုလုပျနိုငျပြုပါရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသူမည်သူမဆို။ ငါတောင်ပိုပြီးလှပလမ်းအတွက်ရိပ်မိပါလိမ့်မည်ထို့နောက်ကလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံ, ကမ္ဘာကြီးကိုနှင့်ဘဝဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟောင်းနွမ်း 30 နှစ်ပေါင်းလှည့်အပြီးခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲခံရဖို့ကဒီခရီးစဉ်ကိုအထူးအကြံပြုလိုတယ်။
ငါကျန်ရစ်မီ, ငါကဲ့သို့သောမကြာသေးခင်ကဒေသခံပဋိပက္ခများကိုသကဲ့သို့ငါကျင်းသွားလာအကြောင်းကိုခဲ့သည့်နိုင်ငံများ, အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘို့, အဲဒီမှာအခြေအနေကဘယ်လိုအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးတည်းခရီးသွား; နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ - ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာများနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများ, အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအပူပိုင်းဒေသရောဂါများပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လို - ကာကွယ်ဆေးထိုး, ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့အဖျားသို့မဟုတ်အစာအဆိပ်သင့်အဖြစ်အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်ဆေးဝါး, ရေမှုန်ရေမွှားများနှင့်ခြင်အသားတင် - ငှက်ဖျားနှင့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လူအပေါင်းတို့သည်လိုအပ်သောအမှုအရာတို့နှင့်မြေတပြင်လုံးခရီးစဉ်အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏စာရင်းကိုငါ့အတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် အွန်လိုင်းခရီးသွားဘလော့ဂ် ကျွန်မလက်ရှိပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ကို update ပေးသော, (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) ။ ဒါကြောင့်ပြီးစီးသည်အထိဒါဟာခဏတစ်ယူပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကသင်ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ငါ့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ငါ့အဘို့အရေးကြီးဆုံးအရာကတော့ကျောပိုးအိတ်ကိုယ်နှိုက်ခဲ့ - ကအဆင်ပြေဖြစ်ရမည်။ ဒါ့အပြင်အဆင်ပြေဖိနပ်, အနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒေသခံ Wi-Fi ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသည်သမျှဗီဇာရတဲ့အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံခရက်ဒစ်ကတ်များ, မိုဘိုင်းဖုန်း - ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူထိတွေ့ရတဲ့အဘို့, အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်ဆေးဝါး, ခြင်အသားတင်နှင့် ကိုလေပေါ်မှာပ။ အားလုံးအရာကြွင်းလေ site ပေါ်တွင်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဝယ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ nicest ရာအရပျမြားနှငျ့အဘယျသို့သင်တို့အဘို့မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာရှိသနည်း
နေရာတိုင်းအပြုသဘောအတွေ့အကြုံတွေကိုစာရေးနှင့်အတူအလွန်ကောင်းတဲ့ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့အထူးအချိန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်အဆုံးမပဲ့ပြင်နှင့်တကွ, အာရှတောင်ရိုးဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းများအတွက်သုံးစွဲအခြိနျခဲ့ - ဘာဝနာများနှင့်တိတ်ဆိတ်များအတွက်အချိန်။3သီလရှင်များနှင့်အတူညတိုင်းဂါထာသီဆိုသူ့ဟာသူနေတဲ့အခမ်းအနား, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာထာထံအပ်နှံနေတဲ့အသက်တာကို - သာတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်နို့တိုက်ကျွေးမှု, 200 နံနက်၌ထရယူခြင်း။ ဒီအစိတျအပိုငျးငါသည်ငါ့အွန်လိုင်းဘလော့ဂ်အတွက်အသေးစိတ်အတူကကိုဖော်ပြရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်အကြောင်း, ဒါကြောင့်ကျယ်ပြန့်သည်။
ဤသည်ခရီးငါ့ကိုသိပ် ပေး. ငါ့ကိုငါခဲရှင်းပြနှင့် retell နိုင်အောင်အများကြီးသင်ပေးတယ်။ ငါသည်ဤလောက၏နှငျ့လူအကြောင်းအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းကိုယ်အဘို့အများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ ငါအသက်, အစားအစာ, ပညာရေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာ, ကိုယ့်သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံများတောရိုင်းသစ်ပင်တွေအကြောင်းကိုဤမျှလောက်သိနားလည်ကြ၏။
ကျနော်တို့ဒေသခံနှင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေး, ပြဿနာတွေနဲ့အပြုသဘောအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ရှည်လျားသောဆွေးနွေးမှုများနှင့်ပုံပြင်များခဲ့အဲဒီမှာနထေိုငျသူသည်အခြားကျောပိုးအိတ်မျက်စိကိုမှတဆင့်ကြည့်ရှုအားပေးအပေါငျးတို့သညျအခွားနိုငျငံမြား, အကြောင်းအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။
ငါမြင်ခြင်းနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်တစ်လောကလုံးဥပဒေများခံစားခဲ့ရ - အသက်, လိင်, ဘာသာတရား, အရေပြားအရောင်သို့မဟုတ်သင်အနေဖြင့်များမှာတိုင်းပြည်၏အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်အဓိပ်ပာယျကိုဘယ်လို - ငါတို့ရှိသမျှသည်အမှန်တကယ်ချစ်ရန်ဒါရောနှောနှင့်ချိတ်ဆက်များမှာ - ကျွန်တော်တို့ဟာများမှာရုံလမ်းကိုချစ်ပြီးချစ်ခြင်းကိုခံရသောအခါကြှနျုပျတို့ပျော်ရွှင်နေကြသည် ။ သင်အမှန်တကယ်လူ့နှလုံးသည်မည်မျှကြီးမားနားလည်နှင့်သင်ချစ်နိုင်မည်ဘယ်လောက်, ဤစကြဝဠာမေတ္တာတော်ကိုပင်တိုတောင်းတဲ့အခိုက်အဘို့, သင်၏အသက်တာကိုထိသူမည်သူမဆိုမှပေးထားနိုင်ပါတယ်။
တကမ္ဘာ၏စည်းစိမ်တွေ့ရှိ - လူတိုင်းအဘို့အလုံအလောကျစရာရှိသောကြောင့်ပိုင်းခြားစေခြင်းဘယ်အရာကိုမျှမအမှန်တကယ်လည်းမရှိ - ကွောကျရှံ့ခွငျး, အမုန်းတီးမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုလုံးဝမလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
ဒီအတိအကျယခုအချိန်တွင်ယခုဒိုင်းနမစ်, အ caducity နှင့်ထာယနေ့ထားတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ - တကမ္ဘာ၏စစ်မှန်သောသဘာမြင်သည်။
တဦးတည်းခရီးထွက်သောအခါ, ဘဝအပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ခံစားခဲ့ရသည်။ သင်အမှန်တကယ်ကဆန္ဒရှိလျှင်အရာခပ်သိမ်း, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပင်ဒီတစ်ခုကဲ့သို့ရှည်လျားသောခရီးများအတွက်အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်နားမထောင်ခြင်းနှင့်ဖတ်ပါသောဤသူအပေါင်းတို့သည်အသေးအဖွဲအမှန်တရားတွေ, ခံစားခဲ့ရဒါပြင်းထန်စွာနှင့်ခရီးဒီလိုမျိုးကာလအတွင်းအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွက်နေထိုင်ခဲ့နိုင်ပါသည်။
ဒီခရီးနောက်မှငါသွားရောက်ကြည့်ရှုချင်သောနိုင်ငံများစာရင်းတွင် (သူမရယ်တတ်), ရှည်ဖြစ်လာသည်မဟုတ်တိုတောင်း။ ဟုတ်ပါတယ်, ဤကဲ့သို့သောတစ်ခုအတွေ့အကြုံကိုသင်ကစွဲရရှိသွားတဲ့နဲ့ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်ကမ္ဘာတဝှမ်းကြာကြာအချိန်ကိုထပ်သွားဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ယခုများအတွက်ရည်ရွယ်ဥရောပဖြစ်ပါသည် - ကပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်, ငါနေဆဲလည်ပတ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းနေရာများရှိပါသည်။ ငါတောင်ကျောပိုးအိတ်အဖြစ်ဘူလ်ဂေးရီးယားနီးပါးအပေါက်မှတဆင့်ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကမ္ဘာကြီးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာကြီးမားတဲ့ဒါသေးငယ်သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းလာမယ့်အချိန်ကတရုတ်, တိဘက်, နီပေါ, သြစတြေးလျသို့မဟုတ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည် ...
ခရီးသည်ပခုံးပိုးအိတ်, အာရှတိုက်မှာကျောပိုးအိတ်, Julia jarvis, လူ, ခရီးသွား | 16-06-2017 | rating:5/ 30